Kidnapping : Milalao tanana ny TIM sy MAPAR -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping : Milalao tanana ny TIM sy MAPAR
Tahaka ireny horonantsary vokarina any Hollywood ireny mihitsy ny fomba nakan’ireo mpanao kidnapping ny vadin’ny tale jeneralin’ny SODIAMA ny zoma faha-6 Jolay lasa teo teny amin’ny tokontanin’ny Immeuble Assist Ivandry, araka ny hita amin’ny horonantsary. Mirongatra etsy an-danin’izany ny fanafihana mitam-piadiana, ary efa tena mahabe resaka hatrany ivelany mihitsy izany ankehitriny, raha tsy hiresaka afa-tsy ny zava-mitranga eny amin’ny lalam-pirenena.
Efa nahazo seza
Mangina tsy handrenesam-peo intsony mikasika ny resaka kidnapping sy ny fanafihana mitam-piadiana ny hainoamanjerin’ny mpanohitra, voakasika manokana amin’izany ny radio Free FM an’i Lalatiana Rakotondrazafy. Moana tanteraka mihitsy ity onjampeo ity amin’izao fotoana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana.
Ity resaka kidnapping sy ny tsy fandriam-pahalemana amin’ny ankapobeny no anisan’ny niampangan’ny TIM sy ny MAPAR ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina, indrindra ny governemanta Mahafaly Olivier. Toa milalao tanana fotsiny anefa ny TIM izay efa ao anaty fitondrana amin’izao fitondrana izao, toraka izany koa ny MAPAR izay manana ny praiminisitra Ntsay Christian, lehiben’ny OMC sy ny EMMO.Nat.
Efa nahazo seza tokoa mantsy ny MAPAR sy ny TIM ka lasa tahaka ny tsy misy intsony izany tsy fandriam-pahalemana sy kidnapping izany ho azy ireo. Ny hainoamanjery mpomba ny fanoherana moa dia efa nangina tsy nanao fandaharana manokana momba izany intsony taorian’ny nahazoan-dry Christine Razanamahasoa, Augustin Andriamananoro, Pierre Houlder, Brunelle Razafitsiandraofa, Irmah Nahaimamy, Guy Rivo, sns
Tena sarotra ve?
Lasa ny saina aman’eritreritra rehefa mijery ilay horonantsary mirakitra ny fomba nakan’ireo mpanao kidnapping an’i Sabera Vasram farany teo tetsy Ivandry, ka mampametra-panontaniana manao hoe: “tena sarotra ve ny mitady sy misambotra ireo naka an-keriny ity teratany Karana ity?”.
Miharihary tsara izao ny fiara nentin’ireo mpaka an-keriny, ary fiara mora fantarina raha tena misy ny fahavononana. Azo ambara mihitsy aza hoe iny tranga teny Ivandry iny no nananana “indice” be indrindra satria hita mazava tsara mihitsy ilay fiara, toraka izany koa ireo olona nilanja kalachnikov na dia nisaron-tava aza.
Atao ahoana moa fa izay no zava-misy eto amintsika, mora ny mitabataba sy mitaona ny vahoaka hanongana fanjakana rehefa mbola ety ivelany; mangina sy moana tahaka ny trondro kosa rehefa mahazo seza ary adino tahaka ny tsy nisy ilay vahoaka nampanantenaina volana sy kintana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai.